महिलालाई यौ; न, चा”ह,ना कतिबेला बढी हुन्छ ? यसो भन्छन महिला! – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/महिलालाई यौ; न, चा”ह,ना कतिबेला बढी हुन्छ ? यसो भन्छन महिला!
महिलालाई यौ; न, चा”ह,ना कतिबेला बढी हुन्छ ? यसो भन्छन महिला!
महिलासँग कुन समय यौ/ न स म्बन्ध राख्दा उनीहरूलाई बढी आन न्द अनुभूति हुन्छ भन्नेबारे सोधिएको थियो । एउटा अध्ययनका अनुसार, महि, नावारी पूरा भएको पाँचौं देखि सातौं दिनसम्म ।
यो अवधिमा महिलालाई सह वासमा बढी आनन्द आउँछ । जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवा र युवतीमा सर्वेक्षणपछि उपयुक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
यौ. न विशेषज्ञहरूका अनुसार, महिनावारी पूरा भएको पाँचदेखि सात दिनसम्म यौ. नको ‘मुड’ मा बढी हुन्छ । महि. नावारी पूरा भएपछि यौ नका लागि उत्ते जित गर्ने हार्मोन सक्रिय हुन्छ ।
अनुसन्धाताहरूले त्यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगमा समेत निकै अध्ययन गरे । त्यस अनुसार, महि, नावारीपछिको तीन दिनमा हुने स; हवासले बढी रमाइलो अनुभूति दिन्छ ।
यस्तो किन हुन्छ, पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म गर्भा/ धारणको सम्भा वना बढ्छ । यसैले यस अवधिमा सम्प, र्कको तीव्र इच्छा जागृत हुन्छ । त्यो सर्वेक्षणमा युव तीहरूले महिनावा रीपछिका तीन दिन पूर्ण यौ; नान; न्द को चाहना राख्ने गरेको बताए ।
उनीहरूका अनुसार, त्यो बेला पाइने यौ; नानन्द अन्य दिनको दाँजोमा निकै सु, खद, आह्ला दक हुन्छ । अध्ययनमा के पनि पाइयो भने, म हिनैपिच्छे तीन दिन गरिने स, हवा, सले वैवाहिक जीवनलाई बढी रमाइलो बनाउने रहेछ, दुवै पार्टनरबीच भविष्यमा यौ; नको विषयलाई लिएर दू री पनि नबढ्ने रहेछ ।
याे,पनि निकै भाग्यशाली हुन्छन् यी स्थानमा कोठी हुने ब्यक्ति, कुन स्थानको कोठीले के अर्थ राख्छ ?
हाम्रो शरीरमा धेरै यस्ता निशान हुने गर्दछन्, जसका बारेमा कयौँ राज लुकेका हुन्छन्। जो हामी धेरैलाई थाहा हुँदैन्। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार शरीरका विभिन्न स्थानमा हुने कोठीको निकै महत्व हुने गर्दछ। जो लाखौँ व्यक्ति मध्ये एकमा मात्र हुने गर्दछ।
जसको खुट्टामा कालो कोठी हुने गर्दछ, ती व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुने गर्दछन्। खुट्टामा हुने कालो कोठीको निकै महत्व हुन्छ। खुट्टामा कालो कोठी हुने व्यक्ति निकै खास हुन्छन्।
किचनमा जोडीले अ’श्लि’ल डा’न्सको भिडियो बनाइरहेका थिए, अचानक जे भयो त्यो कसैले कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दैन्न् !
‘सिक्रेट न्युडिष्ट भिलेज’ जहाँ कसैले लुगा लगाउँदैनन् !
कुन दिशामा धन राख्दा बढेर जान्छ ? कहाँ धन राख्दा नाश हुन्छ? (हेर्नुहोस्)
धेरै नै सुन्दर हुन्छन् यी ३ राशिका युवतीहरु, साथै आकर्षित पनि !